अटोमोबाइल विलासी वस्तु होइन
अनुप बराल, सचिव, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल
यस वर्षको नाडा अटो शोको मुख्य आकर्षण के छ ?
नाडा अटो शोमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डको विक्री वितरण गरिरहेका अटोमोबाइल कम्पनी, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ब्याट्री र ग्यारेज इक्वीपमेन्ट विक्रेता कम्पनीहरू सहभागी छन् । गाडी कर्जा र गाडी बीमाको जानकारी समेत दिनेगरी बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीका स्टल पनि राखिएका छन् । ग्राहक र अटोमोबाइलमा रुचि भएकाहरूका लागि यो एउटा राम्रो अवसर हो । यसमा कम्पनीले ग्राहकलाई आकर्षण गर्नेगरी नै आप्mना ब्रान्ड प्रदर्शन गर्छन् । यस्तै हाइब्रिड तथा विद्युतीय गाडी यो मेलाका आकर्षण हुन सक्छन् । नेपालमै बनेका टायर र लुब्रिकेन्ट्स पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । यो अर्को विशेषता हो ।
सवारी आयातमा नीतिगत कडाइ गरिएको छ । यसले नाडा अटो शोलाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
नीतिगत परिवर्तनका कारण अटोमोबाइल उद्योगमा केही प्रभाव परेको छ । यद्यपि बजारमा नाडा अटो शोको राम्रो प्रभाव रहँदै आएको छ । यो प्रदर्शनीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा अपेक्षा गरेका छौं ।
अटोमोबाइललाई विलासी वस्तुको रूपमा हेरिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
आव २०७३/७४ को तथ्यांकमा कुल जनसंख्याको ७ दशमलव २९ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल र शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसँग मात्र कार÷भ्यान र जीप थियो । गतवर्षमा यो तथ्यांक बढेर कुल जनसंख्याको ८ दशमलव ४३ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल र शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा कार÷जीप र भ्यान पुग्यो । एउटा बस÷मिनिबस बराबर औसत ४०० जना पर्न आउँदो रहेछ । अहिले अटोमोबाइल बजार सुस्त छ । दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक भइसकेको सवारीसाधनको संख्या एकदमै न्यून छ । यस्तो अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्र विलासी कसरी हुन सक्छ ?
अटोमोबाइलले व्यापार घाटा बढाएको भनिन्छ नि ?
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार देशमा कुल रू. ८५ अर्ब ६ करोड २२ लाखबराबरको सवारीसाधन आयात भएको छ । यसका लागि अटोमोबाइल व्यवसायीले रू. ८१ अर्ब २० करोड ८९ लाख राजस्व सरकारलाई बुझाएका थिए । व्यवसायीले एउटा गाडी आयात गर्दा तीनओटा गाडीको मूल्यबराबरको राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रले व्यापार घाटा बढाएको होइन । यो त अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो । अत्यावश्यक सामानको आयातमा कडाइ गर्नुभन्दा देशमा उद्योग विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
नाडा अटो शो गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
यो मेला गाडीको प्रदर्शनी गर्ने अवसर मात्र होइन । देशको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको क्षेत्र भएकाले देशकै गरिमाको विषय हो । यसकारण अटोमोबाइलको जानकारीसहित यसको आवश्यकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यो मेला सञ्चालन भइरहेको छ । ग्राहक र अटोमोबाइलबारे जान्न इच्छुक व्यक्तिका लागि यो राम्रो प्लेटफर्म समेत हो ।